Fitsipika momba ny tsiambaratelo | Fifamoivoizana hiara-miasa
Ity manaraka ity dia mamaritra ny politika momba ny fiainana manokana momba ny bilaogiko fifamoivoizana tranonkala.
09/23/2021 11:25 hariva GMT
Zava-dehibe aminay ny fiainanao manokana. Mba hiarovana tsara kokoa ny fiainanao manokana dia manome an'ity fampandrenesana ity izahay manazava ny fanaonay momba ny fampahalalana an-tserasera sy ny safidy azonao atao momba ny fomba fanangonana sy fampiasana ny mombamomba anao. Manaiky ianao hanaiky ireo politika ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana ny anay tranonkala amin'ny fomba izay mitondra anao hanome anao mombamomba anao manokana.
Ny lalàna mifehy ny fanjakana sy ny zony
Azafady azafady azafady fa mety manana zon'olombelona fanampiny ianao avy amin'ny lalàm-panjakana miorina amin'ny toerana onenanao. Ireo zon'ny fanjakana ireo dia mety hampitombo, hanamafy orina, na raha tsy izany dia hanome voninahitra ny zonay manokana momba ny fiainanao manokana na araka ny lalàna federaly. Ny politikanay dia ny fanajana tanteraka ny politika momba ny tsiambaratelo isaky ny faritra iasanay. Araka izany, afaka mampiasa ny mombamomba anay ianao mba hahatratrarana anay amin'ny fotoana rehetra hitakiana ny zon'ny fanjakana.
Ny fanoloran-tena ho an'ny fiainana manokan'ny ankizy
Ny fiarovana ny tsiambaratelon'ny tanora dia zava-dehibe indrindra. Noho izany antony izany, ny tranonkala tsy hanangona na hitazona fampahalalana mihitsy ao aminay tranonkala avy amin'ireo izay fantatsika fa latsaky ny 18 taona, ary tsy misy ampahany amin'ny tranokalanay voarafitra mba hisarihana olona latsaky ny 18 taona.
Araka ny Fepetran'ny Serivisy sy ny fampiasa amin'ny fampiasana, ny zaza latsaky ny 18 taona dia tsy mahazo mampiasa ny tranonkalantsika sy miditra aminay tolotra. Tsy fikasanay ny hanome vokatra na tolotra ho an'ny zaza tsy ampy taona.
Ny Blog fifamoivoizako dia mampiasa Google Analytics hanampiana amin'ny famakafakana ny fomba fampiasan'ny mpampiasa ilay tranonkala. Mampiasa ny "cookies" ilay fitaovana, izay rakitra an-tsoratra apetraka amin'ny solo-sainanao, mba hanangonana vaovao mombamomba ny log Internet sy ny mombamomba ny mpitsidika amin'ny endrika tsy fantatra anarana. Ny fampahalalana novokarin'ny cookie momba ny fampiasanao ny tranokala (ao anatin'izany ny adiresy IP anao) dia ampitaina amin'i Google. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina hanombanana ny fampiasan'ny mpitsidika an'ity tranonkala ity ary hanangonana tatitra statistika momba ny asan'ny tranokala.
Izahay dia tsy (ary tsy hamela antoko fahatelo) hampiasa ny fitaovana fanadihadiana statistika hanarahana na hanangona izay mombamomba ireo mpitsidika fantatry ny tena momba ny tranonkalantsika. Google dia tsy hampifandray ny adiresy IP anao amin'ny data hafa tazonin'i Google. Na isika na Google dia tsy hampifandray, na hikasa ny hampifandray, adiresy IP misy ny mombamomba ny mpampiasa solosaina.
Azonao atao ny mandà ny fampiasana cookies amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo fikirana mety ao amin'ny tranonkalanao, na izany aza mariho fa raha manao izany ianao dia mety tsy afaka mampiasa ny fiasa feno ato amin'ity tranonkala ity. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity dia manaiky ny fanodinana angona momba anao amin'ny alàlan'ny fomba sy ny tanjona voalaza etsy ambony ianao.
Fanangonana hafa momba ny mombamomba anao
Rehefa mitsidika ny tranokalanay, ny adiresy IP ampiasaina hidirana amin'ny tranokalanay dia mety ho voasoratra miaraka amin'ireo daty sy ora ahazoana miditra. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina amin'ny famakafakana ny fironana, hitantanana ny tranonkalantsika, hanarahana ny hetsiky ny mpampiasa ary hanangonana fampahalalana demografika malalaka ho an'ny fampiasana anatiny toy ny fanombanana statistika sy fanatsarana ny tranokala. Ny tena zava-dehibe, ny adiresy IP voarakitra dia tsy mifandray amin'ny fampahalalana azonao fantarina.
Ny fampahalalana hafa dia mety hangonina ihany koa, izay mahazatra ny ankamaroan'ny tranonkala. Ohatra, ny loharano nanondro anao ny tranonkalantsika dia fantatra amin'ny ankapobeny. Toy izany koa, ny faharetanao amin'ny tranokalanay, sy ny toerana alehanao rehefa miala amin'ny tranokalanay ianao dia azo zahana ihany koa. Ny tahirin-kevitra iraisana voaangona dia misy ny karazana rafitra miasa ampiasain'ny solosainao hidirana amin'ny tranokalanay. Toy izany koa, matetika no voamarika ny karazana mpizaha tranonkala. Averina indray fa fanangonana angon-drakitra mahazatra io ary manampy amin'ny famokarana fanandramana farany ho an'ny mpampiasa farany.
Ny cookies dia fampiharana iray amin'ny Internet mahazatra. Ny cookies dia fitaovana lehibe hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny alàlanay mamela anay hanamboatra ny fampiasanao ny tranokalanay. Ny fampahalalana tsotra dia afindra ao amin'ny solosainao mba hamela ny atiny sy ny zavatra niainanao haneho ny fihetsikao, ny safidinao, sns. Tokony hanao ilay fiheverana fotsiny ianao fa mampiasa cookies ny tranokalanay, ary mariho fa afaka manamboatra fanitsiana ao anaty tranokalaninao ianao mba hanajanonana izany na handraisana fampandrenesana mofomamy hahafahanao mandray ny hetsika tadiavinao. Azafady azafady fa ny fandavana cookies dia mety hanimba ny sasany amin'ireo lozisiantsika ao amin'ny tranonkala ary hahatonga ny lafin-javatra sasany tsy hisy dikany aminao.
Indraindray dia ho fantatrao feno ny fampahalalana voaray, satria ianao no loharano mivantana manome izany. Ohatra, azonao atao fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra bilaogy, valio ny mailaka (na hafatra fampitana na autoresponder), manome adiresy mailaka, mamita fanadihadiana, mangataka SMS, na hafa. Toy izany koa, ny fividianana dia mila fanangonana fampahalalana sasany, toy ny fampahalalana amin'ny carte de crédit, ny adiresy Paypal, ny adiresy ara-batanao amin'ny faktiora sy / na fandefasana, nomeraon-telefaona, sns. Ny fandavana hanome ny sasany amin'ireto fampahalalana ireto dia mety hiteraka tsy fahafahanay manome anao ny vokatra na tolotra nangataka ianao.
Ohatra iray lehibe amin'ny fidirana voafetra amin'ny tranokalanay ny toerana mety hiarovan'ny solonanarana sy ny teny miafina ny atiny. Na ny solonanarana sy ny teny miafina navoakan'ny tranokalanay, na noforoninao, dia saika hifandray amin'ny fampahalalana hafa mifandraika aminao na mifandray aminao ireo. Marina izany satria ny atiny maro izay arovana amin'ny Internet dia miorina amin'ny famandrihana ary matetika aloa. Noho izany, ny anaram-pikambana sy ny teny miafinao dia tsy maintsy mifamatotra amin'ny angona kaonty hafa. Ny anarana mpampiasa sy ny teny miafina, amin'ny endriny manokana, dia tokony hotehirizina tsy miankina.
Mariho fa ny mombamomba anao manokana omena ny hafa ankoatra anay na ny mpivarotra anay dia tsy voatery. Ohatra, mety hamoaka zavatra amin'ny lahatsoratra bilaogy ianao fanehoan-kevitra. Io fampahalalana "manokana" io dia "ampahibemaso" ankehitriny, ary tsy voafehinay izany. Toy izany koa, ianao mizara vaovao amin'ny antoko fahatelo hafa tsy miasa amin'ny maha-mpanome tolotra serivisy anay anay dia mametraka izany fampahalalana izany tsy ho voafehinay ary iharan'ny politika napetraky ny antoko.
Ny tanjonay voalohany hanangonana ny mombamomba anay sy tsy miankina aminao dia ny hitarika ny asanay fotsiny. Azontsika atao ny mampiasa an'io ao anaty mba hanompoanao bebe kokoa. Araka izany, tsy mahita antony hizarana ny mombamomba anao amin'ny antoko hafa sy ny tombontsoa ivelany izahay raha tsy hoe nomenao alalana hanao izany izahay.
Mazava ho azy, misy tranga izay itehirizana ny mombamomba anao amin'ny serivisy antoko fahatelo mpamatsy, toy ny serivisy mailaka mpamatsy, araka ny omen'izy ireo tolotra izay mitarika ny indostria amin'ny kalitao sy filaminana ary tena mahasoa kokoa ny mpampiasa farany antsika noho ny fanandramana ireo serivisy "ao an-trano" toy izany. Na izany aza, tsy takiana aminao mihitsy ny hifampiraharaha amin'ny antoko fahatelo toy izany mivantana, voafetra ny fampiasan'izy ireo ny mombamomba anao, ary tsy afaka mivarotra na mamindra izany amin'ny hafa izy ireo.
Na izany aza, mazava ho azy, ny fampahalalana anao dia misy ampahany amin'ny iray manontolo. Ity fitambaran'ny fampahalalana ity, amin'ny lafiny hafa, dia azo ampiasaina hananana ny toetoetran'ny mpampiasa anay. Ankoatr'izay, azonay atao ny mizara ity fampahalalana ity momba ireo mpitsidika tranokalanay iray manontolo, fa tsy isam-batan'olona, ​​amin'ny antoko fahatelo ho an'ny tanjona samihafa, araka ny fahaizanay irery.
Na dia mpisolovava amin'ny fiainana manokana aza isika dia misy fotoana indraindray mety voatery terena hiala amin'ireo idealy ireo isika. Toy ny motera fikarohana lehibe miatrika faneriterena mitohy hanome data tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'izy ireo, dia toy izany koa no mety hitranga amin'ny tranokalanay. Ny hetsika tsy ara-dalàna na fihetsika matotra na fiampangana hafa dia mety hiteraka andraikitra ara-dalàna amin'ny tranonkalantsika. Amin'ireo tranga ireo dia zonay ny mizara ny mombamomba anao, na raha tsy izany dia voatery teren'ny lalàna izahay.
Etsy ankilany, mety misy fotoana ilainay mizara ny mombamomba anao manokana mba hiarovana ny tombontsoantsika manokana. Ohatra, amin'ny tranga misy ahiahiana na voalaza fa fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona na fanitsakitsahana fananana ara-tsaina hafa dia mety ilaina ny mizara ny mombamomba anao.
Google Adsense sy ny DoubleClick DART Cookie
Google, amin'ny maha mpivarotra doka fahatelo azy, dia mety hampiasa cookies hanaterana doka amin'ity tranonkala ity. Ny fampiasana cookies DART avy amin'i Google dia ahafahan'izy ireo manolotra doka amin'ny mpitsidika izay miorina amin'ny fitsidihany an'ity tranonkala ity, ao anatin'izany ny fitsidihana taloha, ary koa ireo tranonkala hafa amin'ny Internet.
Raha te hiala amin'ny cookies DART ianao dia afaka mitsidika ny doka momba ny fiainana manokana sy doka amin'ny tambajotra Google ao amin'ny url http://www.google.com/privacy_ads.html manaraka ity ny fanarahan-dia ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny mofomamy cookie DART dia iharan'ny politika miafina nataon'i Google .
Ireo mpizara doka na tambajotran-doka an'ny antoko fahatelo dia mety mampiasa cookies ihany koa hanarahana ireo hetsiky ny mpampiasa eto amin'ity tranonkala ity handrefesana ny fahombiazan'ny dokam-barotra sy ireo antony hafa izay homena amin'ny politikany manokana, ny tranokalanay dia tsy mahazo miditra na mifehy an'ireo cookies azo ampiasaina ireo avy amin'ny mpanao dokam-barotra amin'ny antoko fahatelo. Na izany aza, azonao atao ny miala amin'ireo sasany, na dia mety tsy ny rehetra aza, amin'ireo cookies ireo amin'ny toerana iray mora ihany ao amin'ny http://ww.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Nampidirinay ny rohy amin'ity tranokala ity hampiasanao sy hampiasainao. Tsy tompon'andraikitra amin'ny politika momba ny tsiambaratelo amin'ireo tranokala ireo izahay. Tokony ho fantatrao fa ny politika momba ny tsiambaratelo ataon'ireto tranonkala ireto dia mety tsy hitovy amin'ny anay.
Araka ny fantatrao, ny Web 2.0 dia momba ny resaka ihany. Saingy tsy misy fitsipika tsotra vitsivitsy, io resaka io dia mety hivadika lalao kiakiaka izay manakivy ny hafa tsy hiditra amin'ny laharana.
Ka ity ny politikan'ny bilaogy My Traffic Blog. Manaiky ireto manaraka ireto ianao amin'ny alàlan'ny fandefasana amin'ny bilaogiko:
Azonao atao fanehoan-kevitra tsy misoratra anarana. Afaka miditra amin'ny alàlan'ny Disqus, OpenID, Twitter, Facebook ianao — na tsia mihitsy. Miankina aminao. Azonao atao ny mandefa tsy mitonona anarana. Tsy milaza izany aho, fa azonao atao izany raha tianao. Azoko atao ny manova an'io fitsipika io raha misy manararaotra azy.
Azonao atao ny mametraka fanontaniana manaraka. Raha manana fanontaniana ianao dia mety tsy irery ianao. Ny hafa toa mieritreritra toy izany koa. Noho izany, aleoko mandray ny hevitrao ao amin'ny My Traffic Blog toy izay amin'ny alàlan'ny mailaka. Fampiasana tsara kokoa ny fotoanako hitenenana ny rehetra indray mandeha fa tsy hamaliana mailaka mitovy amin'izany.
Mety tsy hitovy hevitra amiko ianao. Miarahaba ahy hiady hevitra. Na izany aza, mangataka aho fa raha tsy miombon-kevitra amiko ianao - na olon-kafa amin'izany, dia ataovy amin'ny fomba feno fanajana izany. Raha ny fahitako azy, be loatra ny kiakiaka eny amin'ny kianjaben'ny vahoaka mba handefitra azy eto.
Ny bilaogiko fifamoivoizana dia manan-jo hamafa ny hevitrao. Ity ny bilaogiko. Tsy manana adidy hamoaka ny hevitrao aho. Ny Fanitsiana Voalohany dia manome anao ny zony haneho ny hevitrao amin'ny bilaoginao fa tsy ahy.
Amin'ny fomba manokana, hofafako ny hevitrao raha mametraka zavatra izay ianao, raha ny hevitro irery, (a) snarky; b) lohahevitra tsy voadinika; (c) manala baraka, manala baraka, manararaotra, manenjika, mandrahona, manala baraka, mametaveta, manafintohina, diso, mamitaka, na izay manitsakitsaka na manentana ny hafa hanitsakitsaka ny fahatsapako haingo sy fahalalam-pomba na lalàna, anisan'izany ny lalàna momba ny fananana ara-tsaina; na (d) “spam”, izany hoe fanandramana hanao dokambarotra, hangataka, na hampiroborobo ny entana sy serivisy. Azonao atao anefa ny mandefa rohy mankany amin'ny tranokalanao na ny bilaoginao farany.
Mbola mitazona ny tompon'ny hevitrao ianao. Tsy tompoko izy ireo ary esoriko miharihary ny andraikitra rehetra mety haterak'izy ireo. Amin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny tranokalako dia manaiky ianao fa mitazona ny zon'ny tompona rehetra amin'ny zavatra alefanao eto ary hampiala ahy amin'ny andraikitra rehetra sy ny andraikitra mety haterak'ireo fanoratana ireo ianao.
Manome fahazoan-dàlana amin'ny My Traffic Blog handefa ny hevitrao ianao. Ity fahazoan-dàlana ity dia manerantany, tsy azo ovaina, tsy ankanavaka ary tsy misy mpanjaka. Omenao ahy ny mitahiry, mampiasa, mandefa, mampiseho, mamoaka, mamerina, ary mizara ny hevitrao amin'ny endrika rehetra, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny bilaogy, anaty boky, horonan-tsary na fampisehoana fotsiny.
Raha fintinina, ny tanjoko dia ny hampiantrano resaka mahaliana amin'ireo olona miahy, marina ary manaja. Mino aho fa hanamora izany ny politikan'ny fanehoan-kevitra tsotra.